What is cooking in Dhuusamareeb? - Politics - Somali Forum - Somalia Online
By Miskiin-Macruuf-Aqiyaar, July 14 in Politics
Jartii loo degay mee ku dhici rabaan odeyaasha maamul goboleedka? Mise madaxda qaranka ayaa siriq loo dhigaayaa. We will see.
Habeen hore ayaa waxay madaxda maamul Goboleedyada Soomaaliya ay soo saareen war saxaafadeed 4 Qodob ka kooban , kaas oo ah mid kamid ah qodobada uu dhigayay in ay casuumeen madaxda dowladda Soomaaliya, si ay qeyb uga noqdaan shir looga hadlayo xaaladda dalka oo ka dhacaya Dhuusamareeb.
Canbuulo, bun iyo shaax. Juskii labaad hada la dhameyey.
Saacadaha soo socda waxa magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug lagu wadaa inay gaaraan wafdi hordhac u ah madaxweyne Farmaajo, kaasi oo dhawaan safar ku tagaya magaaladaasi.
Shirkaasi ayaa lagu wadaa inuu dhawaan ka dhaco magaalada Dhuusamareeb, iyada oo la go’aamin doono marka Madaxda maamul goboleedyadu ay kasoo laabtaan Aaska Ra’iisal Wasaarihii hore ee Soomaaliya, Xasan Abshir Faarax oo ay u tageen magaalada Garoowe.
Khayre iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo tegaya Garoowe
The utter hypocrisy of Somali "politicians" and the self-induced gullibility of the masses is astounding.
Guddoomiye Xaliimo Yarey oo gaartay magaalada Dhuusamareeb
Guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka, Marwo Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey) ayaa maanta gaartay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleeyada Galmudug.
Xaliimo Yarey ayaa waxaa socdaalkan ku wehlinaya xubno ka tirsan guddiga qaran ee doorashooyinka, waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey mas’uuliyiin ka tirsan Gamudug.
Ujeedka safarkeeda ayaa sidoo kale salka ku haya sidii ay kulamo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ula qaadan laheyd madaxda ku sugan magaaladaasi.
Dhuusamareeb ayaa waxaa ka socda shirar looga hadlayo xaaladda dalka iyo sidoo kale doorashada waxaana ku ballansan madaxda dowladda iyo kuwa maamullada dalka.
Xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa haatan ah mid isku cakarin, iyada oo lagu guda jiro marxalad kala guur ah.
Si kastaba ha’ahaatee dhowaan madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa shaaciyey in aysan dalka ka dhici Karin doorasho qof iyo cod ah, loona baahan wada-tashi guud.
Farmaajo oo caawa kulan la leh 100 xildhibaan
Ku-dhawaad 100 Xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ayaa hadda madaxtooyada kulan kula leh madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Xildhibaanadan ayaa Madaxweynaha kala hadlaya arrimaha doorashada dalka iyo hanaanka ay ku dhaceyso, waxayna diidanyihiin sida aan xogta ku helan in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban.
Xubno ka tirsan xuldhibaanadan waxay noo sheegeen in Maadaxweynaha ay ugu tageen inuu u cadeeyo mowqifkiisa ku addan nuuca doorasho ee dalka ka dhaceysa.
Xildhibaanadan ayaa ku doodaya in la fuliyo sharciga doorashooyinka dalka, isla markaana ay doorashadu noqoto mid qof iyo cod ah, sida ku cad sharcigaas oo kol sii horeysay baarlamaanku ansixiyey, madaxweynuhuna saxiixay.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo maanta ka hadlay kulankii golaha ayaa si adag uga hor yimid go’aankii ay dhawaan isku raaceen madaxda dowlad goboleedyada dalka oo ku baaqay in doorashada dalka laga wadatashado, maadaama aysan dhici karin doorasho qof iyo cod ah.
“Ma aqbali karno doorasho dadban iyadoo aan ansixinay sharcigii doorashada, ma jirto meel ay wakhtigaan ku qoran tahay in la aado doorasho dadban. Baarlamaanka ayaa iska leh sharci walba ee doorasho lagu aadi lahaa, ma ahan wax khuseeya maamul goboleedyada” ayuu yiri Guddoomiye Golaha Shacabka Maxamed Mursal.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa si adag uga hor yimid go’aamadii kasoo baxay shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb.
Xog ku saabsan kulankii dhex-maray madaxda DF iyo madax goboleedyada
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo uu wehliyo ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa maanta Dhuusamareeb ku yeeshay kulan hordhac u ah Shirka Wadatashiga Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyada.
Deni ma wuxuu bedelayaa mowqifkiisa ku aadanaa nooca doorasho ee dalka?
Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa markale ka hadlay mowqifkiisa ku aadan hanaanka doorashada qof iyo cod ee ay waddo VILLA SOMALIA, isagoona muujiyey dabacsanaan badan oo ku aadan qorshahaasi.
VILLA SOMALIA ayaa si weyn ugu adkeysaneysa inay dalka ka dhacdo doorasho ‘qof iyo cod ah’, taasi oo la rumeysan yahay inay qeyb ka tahay xeelad uu Farmaajo ku rabo muddo kororsi.
Saciid Cabdullaahi Deni, Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa sheegay inuusan marnaba ka soo horjeedin in la raaco hanaanka doorasho ‘qof iyo cod ah’, taasi oo go’aamadii shirka madaxda maamulada lagu soo saaray inaysan marnaba suurta-gal aheyn.
Deni ayaa si dad-ban usoo bandhigaya tanaasul dabacsanaan ah oo uu ka muujinayo qorshaha VILLA SOMALIA, inkasta oo uu sheegay in uu diidan-yihiin in la isku dhex qaldo qoorasho qof iy cod ah iyo nidaamka u baahan in laga gudbo ee 4.5.
Sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey in daruufaha xiligan ka taagan gudaha Soomaaliya ee kamid tahay amnigu uu suurtagal ka dhigeyn in doorasho qof iyo cod ah oo Shacabka Soomaaliyeed ay doortaan cidii ay doonaan.
Deni ayaa u muuqda qof kasoo dabcaya mowqifkiisa ku aadanaa nooca doorasho ee dalka, kaasi oo uu hore meel adag iskaga taagay.
Hadalka Deni ayaa sidoo kale u muuqan kara mid laab xaadasho oo ku aadan shirka ay isku hor-fadhiisanayan madaxda sarre ee dowladda federaalka iyo cadeynta in Puntland aysan kasoo horjeedin hanaanka doorasho ee qof iyo cod ee baarlamaanku ansixiyey, balse xiligan caqabadaha ku gadaaman aysan saamaxayn.
Cumar Filish oo laba jeer xanuun uga baaqday safarka Dhuusamareeb
Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish, ayaa laba jeer uu xanuun uga baaqday safar uu ku tegi lahaa magaalada Dhuusomareeb.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegay duqa Muqdisho uu shalay iyo maantaba ka baaqday safar uu ku aadi lahaa Dhuusamareeb, sababo la xiriira xanuunkan.
Sidoo kale xogta aan ku helnay xanuunka guddoomiye Cumar Filish ma ahan mid darran, waxaana kasoo baxaya warar kala duwan, ayada oo qaarkood ay sheegayaan inuu gaas ku kacay, halka qaar kalena ay sheegayaan inuu isku arkay qandho.
“Waa xanuunsan yahay balse ma ahan mid darran, shalay iyo maantaba waan ka baaqanay safarka sabab arrintaan la xariirta,” ayuu yiri qof ka tirsan xafiiska guddoomiyaha gobalka Banaadir, oo codsaday inaan la magacaabin.
Waxyaabaha adkeeyay in la helo warbixin dhameystiran oo xaaladda guddoomiyaha ah ayaa sidoo kale waxaa qeyb ka ah in Guddoomiyaha uu waayahaanba ku shaqeynayay gurigiisa maadaama uu dhismo ku socdo xarunta gobalka.
Si kastaba, Cumar Filish ayaa la filayaa inuu berri u safro magaalada Dhuusamareeb kana qeyb-galo shirka madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale ku celiyey muhiimadda doorasho qof iyo cod ah in la xaqiijiyo xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ay u leeyihiin in ay doortaan masuuliyiinta ay ku aaminayaan hoggaaminta dalka.
Mowqifka Farmaajo kadib kulamadii dhacay
Ilo ka tirsan mas’uuliyiinta la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi saacadihii tagay ayaa xaqiijiyey iney jirto kala aragti duwanaanshiyo ku saabsan qaabka doorashada oo u dhaxeysa dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Arrintan ayaa loo fasirtay in madaxweynaha uu raadinayo waqti kordhin hey’adaha dastuuriga ah si ay u suuro-gasho doorasho qof iyo cod ah. Muddo kordhinta ayaa noqon karta inta ay guddiga doorashada dalbadeen ama ka badan oo ah ilaa laba sano.
Wararkii ugu dambeeyey kulan caawa ka socda Dhuusamareeb
Wararka aan ka heleyno xarunta madaxtooyada Galmudug ayaa sheegaya in madaxda dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada ay mar kale caawa u socdo kulan kadib kulankii halkaas ku dhex-maray maanta.
Kulankii maanta ayaa ku saabsanaa sidii loo jaangoyn lahaa qodobbada muhiimka u ah wadatashiga Heer Federaal iyo Heer dowlad Goboleed, hannaanka geeddi socodka siyaasadda doorashooyinka iyo Amniga Qaranka.
Sida aan xogta ku helnay kulanka maanta ayaa doodo adag oo ku saabsan doorashada ay harreeyeen, ayada oo aanay jirin wax isfaham ah oo laga gaaray ajendeyaasha kulanka weyn ee la filayo inuu berri furmo.
Kulanka caawa socda ayaa la sheegay in ujeedkiisa uu yahay in wixii maanta aan la isku fahmin xal laga gaaro, si kadib shirka si rasmi ah loogu furo berri.
Ujeedada ugu weyn ee kulamadan ayaa ah in ayada oo wax la isku raacsan yahay la tago shirka weyn, maadaama uu yahay mid dadka oo dhan iyo warbaahinta u furan islamarkaana aan dood iyo buuq lagu muujin karin.
Dhinaca wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Villa Somalia ay weli ku adkeysaneyso doorasho qof iyo cod ah iney ka dhacdo Soomaaliya 2020/2021-ka, taasi oo ah caqabadda taagan.